मनोरञ्जन – Page7– News Of Nepal
‘शक्तिशाली’ महिला बनिन् प्रियंका
एजेन्सी – केही दिनअघि मात्र अभिनेत्री प्रियंका चोपडाका पति निक जोनस विश्वकै गायकमध्ये पहिलो नम्बरमा थिए । अब प्रियंकाको सफलतालाई हेर्दा यो जोडी एकअर्काका लागि भाग्यमानी सावित भएको छ । प्रियंकाले विश्वभरमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा उत्कृष्ट ५० मा आफ्नो नाम जमाउन सफल भएकी छन् । प्रियंका ‘युएस टूडे’को..
रणवीर कपूरसँगको विवाहका विषयमा यसो भनिन् आलियाले
आलिया भट्ट अहिले बलिउड करीयरको उचाइमा छिन् र उनी आज जन्मदिन सेलेब्रेट गरिरहेकी छन् । आलिया प्रायः चर्चामै रहन्छिन् र चर्चाको एक कारण रणवीर कपूर पनि हुन् । रणवीरसँग आलियाको अफरको खबर प्रायः आइरहेको हुन्छ । आलियाले आफ्नो विवाहका सम्बन्धमा हालै खुलेर कुरा गरेकी छन् । अहिले बिहेको सीजन चलिरहेकाले..
कुखुराले स्याल मारे !
एजेन्सी – उत्तर पश्चिम फ्रान्सको एक कुखुरा फार्ममा कुखुराहरू मिलेर स्याल मारिदिएका छन् । यो अनौठो घटना ब्रिटानीको एक शिक्षालयको फार्ममा भएको हो । तीन हजार कुखुरा भएको उक्त फार्ममा स्याल पसेपछि सयौं कुखुराले सामूहिक आक्रमण गरेका थिए । ‘उनीहरूमा सामूहिक भावना देखियो र चुच्चाले स्याललाई आक्रमण..
विवाह छोरीको, दुलही आमा !
एजेन्सी – भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपूर जिल्लामा अधबैंसे दुलहालाई देखेपछि दुलही ममाथि धोका भएको भन्दै विवाह गर्न अस्विकार गरिन् । भारतीय मिडियाका अनुसार दुलहीले दुलहातर्फ माला फ्याँक्दै चिच्याउँदै भनिन्, ‘ममाथि धोका भएको छ ।’ स्रोतका अनुसार दुलहीको यस्तो व्यवहार देखेपछि त्यहाँ उपस्थित..
गित संगितमै मग्न बुनु शर्मा उप्रेती म्युजिक भिडियो सहित
पछिल्लो समय युवाहरुको मनमुटुमा बस्ने प्रयासमा रहेकी बुनु शर्मा उप्रेतीको गित स‌ंगितले बजारमा राम्रै स्थान बनाउन थालेका छन् । लामाे समय सम्म संगितको क्षेत्रमा मेहनत गरेर गितमा स्वर तथा स‌ंगित भर्न थालेकी बुनुले अहिले पनि नयाँ गित बजारमा ल्याउनका लागि नै प्रयासरत हुने गरेकी छन् । प्रत्यक नसा नसामा..
गर्भावस्थामा सुन्दरता बिछ्याउने १२ सेलिब्रिटी
गर्भावस्था निकै सुन्दर पल हो । हामी सबैले सुनेका छौं कि गर्भावस्थामा महिलाको छाला निकै चम्किलो हुन्छ जसलाई ‘प्रेगनेन्सी ग्लो’ भनिन्छ । तर धेरैलाई लाग्न सक्छ कि पेट बढ्दै गएपछि ठूलो साइजको सहज हुने खालका पहिरन लगाउनुको विकल्प छैन । तर यो सही होइन । यहाँ यस्ता हलिउड सेलिब्रिटीका तस्बिर दिइएका छन् जसले..
जाम सुस्तै सार्बजनिक” भिडियो सहित
सालको पातको टपरीबाट इतिहास कायम गरेका संगीतकार गायक तथा मोडेल बसन्त थापाले फेरि आर्को जादुमयी दोहोरी गित बजारमा ल्यायका छन । बसन्त थापाको संगीत, सब्दमा बसन्त, रबि र जुना श्रीसको आवाजमा कुलेन्द्र बिश्वकर्मा, राम्जी खाण र बसन्त थापा अनि जहन्वी बस्नेत द्वारा अभिनय गरियको जाम सुस्तैले छोटो समयमै पनि..
सेलिब्रिटीको गोप्य तस्बिर
हामीले अनस्क्रिन देख्ने सेलिब्रिटी अफस्क्रिनमा पनि त्यस्तै देखिन्छन् भन्ने छैन । अनस्क्रिनमा खत्रा देखिन उनीहरुले छालाका विभिन्न समस्या छोप्न मेकअप, कन्टोर इत्यादि प्रयोग गर्छन् । यहाँ हामी यस्ता १२ सेलिब्रिटीबारे जानकारी दिँदै छौं जो स्क्रिनमा भन्दा निकै फरक देखिन्छन् । केटी पेरीः केटी..
बेहुलीका मेकअप अघि र पछिका तस्बिर
विवाहमा सबैभन्दा हेर्ने भनेको बेहुला–बेहुलीलाई नै हो । अझ विशेषगरी बेहुलीलाई । उनको कपाल, पहिरन, मेकअपबारे विशेष चर्चा हुने गर्छ । धेरै महिलालाई आफ्नो जीवनको यो महत्वपूर्ण दिनमा विशेष देखिने रुची पनि हुन्छ । विवाहको दिनमा महिलालाई सुन्दर देखाउन मेकअप आर्टिस्टको ठूलो भूमिका हुन्छ । यहाँ ब्राइट..
प्रताप बानियाँ म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५, चिप्लेटीका युवा तथा नवगायक राजन खत्रीले आफ्नो पहिलो लोकदोहोरीगीत ‘छातीको देब्रे पाटोमा’ बजारमा ल्याएका छन् । सारथी म्युजिक प्रालिको प्रस्तुतीमा सर्जक कस्तुप पन्तको लय तथा गायक प्रवीण खत्रीको शब्द संयोजनमा उनले गीत बजारमा ल्याएका हुन् । ‘छातीको देब्रे..